Rinjiga geedaha tubaakada (ama si fudud, mishiinka wax lagu shiido) waa aalad cylindrical ah oo leh 4 qaybood oo kala go'a oo leh ilkaha ama biinanka oo u dhigma si marka qaybta sare loo rogo, walxaha gudaha ku jira la jeexo. Qaybta 3aad waxaa lagu soo ururiyaa qaar la jeexjeexay qolka hoose oo la sifeeyo xoogaa kief ah. Qeybta 4aad waxaa la soo aruuriyaa kief.
In kasta oo soo-saareyaashu ay ku andacoodaan in loogu talagalay in lagu isticmaalo geedo iyo dhir udgoon si wax loo karsado, haddana waxaa badanaa loo isticmaalaa in la jeexjeexo, taas oo keenta badeecad si fudud gacanta loogu soo rogi karo "wadajir" oo si siman u gubta. Boorsooyinka geedaha tubaakada waxaa caadi ahaan laga sameeyaa biro ama caag waxayna ku yimaadaan midabbo kala duwan iyo biro la safeeyey.
Hore: Cabbitaanka Sigaarka
Xiga: Qaybaha mashiinka CNC ee Custom -ka ah ee Tayada Sare leh
Furimaha geedka aluminium